DEG DEG:- Diyaarad qaas ah oo ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ka qaaday magaalada Garoowe – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Diyaarad qaas ah oo ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ka qaaday magaalada Garoowe
Wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa sheegaya in diyaarad gaar ah oo laga leeyahay dalka Isu-taga Imaaraadka Carabta ay goordhaw magaaladaasi ka qaaday ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke.
Diyaaradaasi oo saakay aroortii soo caga-dhigatay garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe ayaa la sheegayaa in uljeedkeedu uu ahaa inay halkaasi ka qaado ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, waxayna wararka sheegayaan inuu haatan ku wajahan yahay magaalada Dubai ee dalka Isu-taga Imaaraadka Carabta.
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa la sheegayaa inuu socdaalkiisa la xiriiro ololaha doorasho ee madaxweynaha Soomaaliya, kaas oo la filaayo inay dhawaan ka dhacdo dalka.
Cumar C/rashiid ayaa ka mid ah musharixiinta sida weyn ololaha ugu jira sidii ay ugu guuleysan lahaayeen xilka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo doorashadiisu ay dhawaan dhici doonto.
Dhinaca kale, dowladda Imaaraadka Carabta oo taageero weyn siineyso ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa dhaqaalihii ugu badnaa ku bixineeysa sidii uu isaga doorashada ugu guuleysan lahaa, iyadoona waqtiga doorashada madaxweynaha uu yahay mid aad u soo dhawaaday.
Ugu dambeyntii, maalmaha soo socdo ayaa la filayaa in dalka uu ka bilaawdo ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya, waxayna u badan tahay in doorashadaasi ay dhacdo dhamaadka bishaan December ee 2016-ka, inkastoo madaxda madasha ay dhawaan shaaciyeen in doorashada dib loogu dhigay bisha Janaayo ee sanadka 2017-ka.